जिन्दगी छ भने मृत्यु पनि छ। यसरि मृत्यु भैदियो कि रुनु कि हाँस्नु ? भए मान्छे ! – Khabar Patrika Np
जिन्दगी छ भने मृत्यु पनि छ। यसरि मृत्यु भैदियो कि रुनु कि हाँस्नु ? भए मान्छे !
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र ०४, २०७७ समय: २३:३७:१६